Nanomboka ny volana novambra 2018 anefa dia narary mafy izy. Tsy afaka mandeha fa mijanona ao an-tranony ao amin’ny Lot 120 Cité Valpinson 11/62 Toamasina.
Efa natao ny fitsaboana rehetra. Ankehitriny, lany ny teo am-pelatanana. Amin’izao fotoana izao dia vola 12 000 000 Ar eo ho eo no ilaina ahafahany manohy ny fitsaboana dia ny fividianana protezy atao amin’ny taolana sy anaovana fandidiana ahafahany mahazo fahasalamana indray.
Ho an’izay te hanampy an’i Henintsaina Dofa dia ny 034 26 642 87 no laharana ahafahana mifandray mivantana amin'i Dofa.